မောငျလို့ပဲချေါမယျနျော – My Blog
ဝလေကွီးသညျ အိပုံ့တို့ သားအမိ ကို သူ့အိမျမှာ ချေါထားလိုကျပွီးတဲ့နောကျ ဟိုတုံးကလို လမျးဘေး ထမငျးဆိုငျတှမှော ကွုံသလို စားနရေတဲ့ ဘဝမြိုးကနေ ကငျးဝေး လှတျမွောကျသှားသညျ ။ အိပုံ့တို့ သားအမိသညျ ထမငျးဟငျးတှေ ခကျြပွီး သူ့ကို ဂရုတစိုကျ အမွဲကြှေးနလေို့ သူသညျ ဝလေကွီး ဆိုတဲ့ နံမညျနဲ့ လိုကျဖကျအောငျ ဝတုတျပွဲကွီး ဖွဈလာတော့မညျ လို့ စနမေက နောကျ သညျ ။ ဝလေကွီးသညျ တကောငျကွှကျ ဘဝနဲ့ တယောကျထဲ နလောခဲ့သူ တယောကျ ဖွဈလို့ အိပုံ့တို့ သားအမိ သူနဲ့ လာနတောကို ကနြေပျ သဘောကနြသေညျ ။အငျး အိပုံ့ကို စတှကေ့ထဲက သူ သဘောကခြဲ့တာ ဖွဈသညျ။
နောကျပိုငျး အိပုံ့ရဲ့ အမကေို တှလေ့ာတော့ ခြောခြောဖွူဖွူ နဲ့ စှငျ့ကားတဲ့ တငျပါးကွီးတှနေဲ့ အိပုံ့အမေ ကိုလညျး သူ သဘောကမြိပွနျသညျ ။ သူတို့ သားအမိနဲ့ တအိမျထဲ နီးနီးကပျကပျ နနေရေတဲ့ အခါ ဝလေကွီးရဲ့ စိတျတှေ ဖေါကျပွနျ နိုးကွှနခေဲ့သညျ ။ အိပုံ့ကလညျး ဝလေကွီး စလိုကျရငျ လကျခံမယျ့ ပုံစံ ရှိနသေညျ ။ သမီးရော အမရေော သူ သဘောကနြမေိသညျ လို့ ဆရာစိုးနဲ့ ဆုံခိုကျ ရငျဖှငျ့လိုကျသညျ ။ ဆရာစိုးက တဟားဟား ရယျသညျ ။ “ မငျး တျောတျော အားကွီးတဲ့ကောငျဘဲ….ဟီး…လုပျကှာ…..ခသြာခြ…..” လို့ ပွောသညျ။
အားပေးသညျ ။ မွှောကျပေးသညျ ။ဒီနေ့ ဝလေကွီး အိမျပွနျနောကျကသြညျ ။သူတို့အဖှဲ့သညျ အထကျက ညှနျကွားခကျြအရ “ လူကုနျကူးဂိုဏျးကွီး ” တဂိုဏျးကို “ လိုကျ ”နရေသညျ ။ ကှငျးဆကျတှကေို တခုခငျြး သသေခြောခြာ လိုကျနသေညျ ။ တခါထဲ မိရာကို မဖမျးပဈလိုကျသေးဘူး ။ ခေါငျးဆောငျသူတှေ နောကျကှယျက အားပေးကူညီနသေူတှကေိုပါ သိခငျြတဲ့အတှကျ ကွိုးရှညျရှညျနဲ့ လှနျထားပွီး စောငျ့ကွညျ့နကွေသညျ ။ သူတို့အဖှဲ့ထဲက ဘကွီးခိုငျနဲ့ ဘုလကျတို့က ညဖကျပါ တာဝနျယူပွီး နောကျယောငျခံလိုကျ..စောငျ့ကွညျ့တာဝနျ ကို ဆကျယူနသေညျ ။ ဝလေကွီးကိုတော့ ဒီည ပွနျခှငျ့ပေးလိုကျသညျ ။ အိမျပွနျရောကျတော့ အိပုံ့ရဲ့ အမေ ဒျေါဝိုငျးစု အိပျနပွေီ။ အိမျတံခါးကို အိပုံ့က လာဖှငျ့ပေးသညျ ။ အိပုံ့လညျး အိပျရာထဲက ထလာပုံရသညျ ။ ဆံပငျဖရိုဖရဲနဲ့ အိပျမှုံစုံမှား အိပုံ့သညျ ကရိုကရိုနဲ့ တမြိုးလေး လှနသေညျ။
“ အကို..ထမငျး စားအုံးမလားဟငျ…” လို့ လသေံလေးနဲ့ မေးလိုကျတဲ့ အိပုံ့သညျ ဝလေရဲ့ စိတျထဲမှာ တအား လှနသေညျ ။ ခဈြစရာကောငျးနသေညျ ။ ဘိုကျက ဒီလောကျ မဆာပမေယျ့ အိပုံ့ ပွငျကြှေးတဲ့ ညစာကို သူနဲ့ နီးနီးကပျကပျ နှဈယောကျထဲ စားခငျြတဲ့ အတှကျ “ အငျး စားမယျ…အိပုံ့ကော စားပွီးပွီလား…” လို့ မေးလိုကျသညျ ။ အိပုံ့က ရယျသညျ ။ “ အကိုက လညျး..အခြိနျကိုလညျး ကွညျ့ပါအုံး…ညနကျလှပွီ..အိပုံ့..အမနေဲ့ ညနထေဲက စားပွီးပွီ..အကိုရဲ့..လာ….အကို့ ကို ဟငျးနှေးပေးမယျ…” လို့ ပွောပွီး မီးဖိုခနျးထဲကို ဦးဆောငျပွီး အရှကေ့ သှားလိုကျတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ ခါးသေးသေး အောကျက တငျလှလှတှကေို သူ အငမျးမရ ကွညျ့လိုကျမိသညျ ။ဟူး…ကောငျးလိုကျတဲ့ အိုး…။ တုနျခုံနကွေသညျ။
သူ ထမငျးစားတာကို ဘေးကနေ ထိုငျကွညျ့နတေဲ့ အိပုံ့သညျ ရုပျရှငျမငျးသမီး အိန်ဒွာကြျောဇငျ ပွုံးတဲ့ အပွုံးလေးမြိုးနဲ့ ။ ဝလေကွီး ထမငျး ဆကျ မစားနိုငျတော့ ။ “ ဟငျ….တျောပွီလား..ဘာလဲအကို..ဝိတျလြော့နလေို့လား…..” “ ဟငျ့အငျး….မစားနိုငျ မအိပျနိုငျတာ ကွာပွီ…..” “ ဘာလို့လဲဟငျ..မနညေ့တုံးက အကို အိပျနတောမှ သိုးလို့…ဟုတျလို့လား……” “ ဟုတျတယျ…..အကို့မှာ ဝဒေနာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားနရေတယျ..အိပုံ့…” “ ဟယျ..ဘာဖွဈလဲ အကို..ဘိုကျအောငျ့တာလား….” “ မဟုတျဘူး…..” သူ စားထားတဲ့ ပုဂံခှကျယောကျတှကေို သိမျးပေးနတေဲ့ အိပုံ့အနားကို တိုးကပျသှားလိုကျသညျ။
“ ဟငျ..အကို..ဘာလိုခငျြလဲဟငျ…” “ အကို လိုခငျြတာကို ပေးမှာလား….” “ အကိုက ဘာလိုခငျြလို့လဲ….” “ အိပုံ့ရဲ့ …. အခဈြ…” “ အို..အကိုကလညျး……” အိပုံ့ မကျြနှာလေး ရဲတှတျသှားသညျ ။ အိပုံ့ခါးသေးသေးလေးကို ဆှဲကာ ဖကျလိုကျသညျ ။ သူ့ရငျခှငျထဲကို အိပုံ့ ရောကျလာသညျ ။ အရငျဆုံး နဖူးဝငျးဝငျးလေးကို နမျးလိုကျသလား ။ နှာခေါငျးလေးကို နမျးမိသလား ။ မသိလိုကျ ။ အနမျးတှကေ အိပုံ့ရဲ့ မကျြနှာ အနှံ့မှာ ။နောကျဆုံး သိလိုကျတာက အိပုံ့ရဲ့ နှုတျခမျးဖေါငျးအိအိလေးတှကေို သူ့နှုတျခမျးတှေ နဲ့ စုတျနမေိပွီ ဆိုတာကိုပါဘဲ ။ အိပုံ့မကျြလုံးလေးတှေ မှိတျသှားသညျ ။ နှုတျခမျးတှကေ တျောတျောနဲ့ ခှာလို့ မရပမေယျ့ ခှာခှာခငျြး သူက “ သိပျခဈြတယျ…အိရယျ…” လို့ ပွောလိုကျ သလို အိပုံ့ကလညျး “ အတူတူဘဲ အကို..အိလညျး အကို့ကို သိပျသိပျခဈြတယျ….” လို့ ပွနျပွောလိုကျသညျ။
ပှငျ့လငျးတဲ့ အိပုံ့ကို သူ တအား သဘောကသြှားသညျ ။ တငျးတငျးကွပျကွပျ ဖကျထားကွတော့ ကိုယျအရှေ့ ပိုငျးခငျြး ပူးကပျထိတှနေ့သေညျ ။ အိတငျးတငျး ရငျစိုငျတှကေ သူ့ရငျဘတျနဲ့ ဖိကပျမိနသေညျ ။ သူ့လကျတ ဖကျက အိပုံ့ရဲ့တငျပါးအိအိတှေ အပျေါကို ရောကျနသေညျ ။ နှုတျခမျးခငျြး ပွနျပူးကပျ စုတျမိကွပွနျသညျ ။ လကျက အလိုလို အိပုံ့ရဲ့ တငျပါးကွီးတှကေို ဆုပျညှဈနမေိသညျ ။ ကောငျးလိုကျတဲ့ ကနျြးမာရေး …။ တောငျ့လိုကျတဲ့ ဖငျတုံးကွီးတှေ ။ ဝလေကွီးရဲ့ လကျဖဝါးတှကေ အပီကို ဆုပျနယျကိုငျတှယျနမေိသညျ ။ အိပုံ့လညျး သူ့လိုဘဲ ကာမရာဂစိတျတှေ ထကွှနပွေီ ။ သူ့ကို တငျးတငျးကွပျကွပျ ဖကျထားပွီး သူ စုတျနမျးတာတှကေို ပွနျတုံ့ပွနျနသေညျ ။ အိပုံ့သညျ ဝလေကွီးရဲ့ အနမျး အထိအတှတှေ့ကွေောငျ့ ဝလေကွီးရဲ့ ရငျခှငျထဲမှာ ပြော့ကခြှယေိုငျသှားသညျ ။ ကာမစိတျတှေ တအား ထကွှနတောကွောငျ့ ဝလေကွီး ပွုသမြှ ခံဖို့ သူမကိုယျကို ပေးအပျလိုကျပွီ ။ ဝလေကွီးလညျး အိပုံ့ကို ကောကျခြီမလိုကျပွီး ခွလှေမျးကြဲကြဲနဲ့ သူ့အိပျခနျးထဲကို ချေါသှားလိုကျသညျ ။ အိပုံ့ရဲ့ အိမျနရေငျး ဝတျထားတဲ့ ထမိနျနှမျးလေးသညျ ပွလြေော့နသေညျ။
အိပုံ့သညျ ထမိနျကို ပွနျခညျြနှောငျ ဖို့ မကွိုးစားတော့ ။ ဝလေကွီးရဲ့ ကုတငျပျေါမှာ ပကျလကျကလေး လနျကနြတေဲ့ အိပုံ့ရဲ့ မကျြလုံးတှေ ပိတျနသေညျ ။ နှုတျခမျးလေး တှကေ ဖူးကွှနသေညျ ။ မပှငျ့တပှငျ့နဲ့ ဝလေကွီး ရဲ့ နှုတျခမျးကွီးတှေ လာ စုတျမှာကို မြှျောလငျ့နကွေသညျ ။ အရငျဆုံး ဝလေကွီးသညျ အိပုံ့ရဲ့ တီရှပျဟောငျးလေးကို ခြှတျလိုကျသညျ ။ အိပုံ့သညျ သူခြှတျတာကို မကနျ့ ကှကျတဲ့အပွငျ ကူညီပွီး ခြှတျပေးလို့ ဝလေကွီး သဘောကသြှားသညျ ။ လုံးတငျးပွီး တှဲမကသြေးတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အပြိုမ နို့လုံးကွီးတှကေို ဝလေကွီး ကွညျ့ပွီး တံတှေး ဂုကနဲ မွိုခလြိုကျ ပွီး နှာခေါငျးကွီးနဲ့ တရှုံ့ရှုံ့ စနမျးသညျ ။ နို့သီးခေါငျး အဖုလုံးလေးတှကေ မာကြော ထထောငျနသေညျ ။ ကာမ စိတျတှေ ထကွှလို့ ဖွဈမညျ ။ “ အိပုံ့ကို ခဈြလားဟငျ…..” လသေံလေးနဲ့ မေးလိုကျတဲ့ အသံနဲ့ ဝလေကွီး ရဲ့ “ အငျး..အရမျးခဈြတယျ….” လို့ ပွောလိုကျတဲ့ အသံက တိတျဆိတျနတေဲ့ ညအလညျမှာ သိသာလှလို့ တရေးနိုးလာတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အမေ ဒျေါဝိုငျးစု ကွားသှားသညျ။
ဟယျ…..သ…သမီးလေး….နဲ့…မောငျဝလေ…….. နားစှငျ့ထောငျလိုကျတော့ “ ပွှတျ…ပွှတျ…ပွှတျ..ပွှတျ….” ဆိုတဲ့ အသံတှကေို ကွားလိုကျရသညျ ။ တဆကျထဲမှာ ဟငျး..အငျး..ဟငျး…..ဟငျး……နဲ့ ညညျးလိုကျတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အသံလေးတှကေိုပါ ကွားလိုကျရသညျ ။ ဟငျ…..ဒါ….ဒါ…..ဒါ…..လိုးတဲ့ အသံတှလေား….. အာ…မဟုတျလောကျဘူး……နို့တှကေို စို့ပေးနတေဲ့ အသံတှဘေဲ ဖွဈမယျ . . . . ဒျေါဝိုငျးစုသညျ သမီးနဲ့ ဝလေတို့ကို သှားပွီး မတားမိတဲ့အပွငျ သူတို့အခနျးဆီက ကွားနရေတဲ့ အသံတှကေို သဲသဲကှဲကှဲ ကွားခငျြနတေဲ့ စိတျတှေ ပျေါနသေညျ ။ အိပုံ့ရဲ့ ညညျးငွူသံတှကေို ဆကျတိုကျ ကွားနရေသညျ ။ ဒျေါဝိုငျးစုလညျး ခွတှေေ လကျတှေ ဒူးတှေ တုနျနသေညျ ။ ဒီ ဝလေ ဆိုတဲ့ကောငျကွီးသညျ သူ့ကို ကွညျ့တဲ့ ပုံစံတှကေ မရိုးခဲ့ဘူး ..။ တနနေ့ေ့ သူ့ကို ကွံစညျလာလိမျ့မယျ လို့ ထငျထားတာ။ ဝလေ ရုပျက တဏှာထနျမယျ့ ရုပျ ။ ရငျခုံမိခဲ့တာ ။ အခု အိပုံ့ကို ကွံစညျနပွေီ ။ ဒျေါဝိုငျးစု အနနေဲ့ ဝလေကွီးက ကြေးဇူးရှငျ ။ အိမျပေးနရေုံမက လုပျငနျးတခုခု လုပျဖို့ကိုလညျး ငှရေငျး မတညျပေးမညျ ဆိုတော့ သမီးလေးရော သူရော ဒီကောငျကွီးကို ဖူးဖူး မှုတျထားမိကသညျ ။ သူတို့ အဖှဲ့က အရမျး သဘောကောငျးကွသညျ။
အိပုံ့လေးရဲ့ မကျြနှာနဲ့ ဒျေါဝိုငျးစုကို လညျး ပေးကမျးကွတာတှကေ မနညျးဘူး ။ သူတို့ကောငျးလှနျးတာတှကွေောငျ့ သူတို့ကိုလညျး အစစ ကူညီ လုပျကိုငျပေးမညျ လို့ ဆုံးဖွတျပွီးသား ။ အိပုံ့ရဲ့ “ အား……အိုး….” လို့ အျောလိုကျတဲ့ အသံက တျောတျော ကယျြသှားသညျ ။ ကွညျ့ရတာ ဝလေ အိပုံ့ကို လိုးနပွေီ ။ ဒျေါဝိုငျးစုလညျး စိတျတှေ တအား လှုပျရှားနပွေီး ပေါငျတနျ နှဈဖကျ ကွားက စိုစိစိ လို ခံစားမိလို့ ကြှတျပွနေေ တဲ့ ထမိနျထဲ လကျသှငျးပွီး စမျးလိုကျမိတဲ့အခါ အရညျတှေ စိုစိုရှဲနတောကို စမျးမိလိုကျသညျ ။ ဟယျ….ငါ….ငါ… တအားကို စိတျတှေ လာပွီး အရညျတှေ စိုနပေါလား……။ ဝလေကွီးရဲ့ အခနျးထဲက အသကျရှူသံပွငျးပွငျးတှေ အိပုံ့ညညျးသံတှေ ဆကျတိုကျကွားနရေသညျ ။ ကုတငျမွညျ သံတှရေော….။ ဒျေါဝိုငျးစုသညျ တတျနိုငျရငျ သူတို့ ဘာတှေ လုပျနကွေသလဲ ဆိုတာတှကေို ပွေးကွညျ့လိုကျခငျြစိတျတှေ ပေါကျ နသေညျ ။ သူ လာခြောငျးသညျ ဆိုတာကိုလညျး သူတို့ သိလို့ မဖွဈဘူး ။ ဝလေကွီးရဲ့ အိပျခနျးထဲက ကုတငျပျေါမှာ…… အိပုံ့သညျ ပေါငျတှကေို အစှမျးကုနျ ဖွဲကားပေးထားသညျ ။
ဝလေကွီးသညျ အိပုံ့ရဲ့ စောကျဖုတျကို ကကြနြန ယကျပေး အပွီး စလိုးသညျ ။ သူ့တုတျဖီးလှတဲ့ လိငျတနျခြောငျးကွီးကို အိပုံ့ရဲ့ အရညျတှေ စိုစိုရှဲနတေဲ့ စောကျ ဖုတျပေါကျထဲကို တဖေိ့သှငျးလိုကျသညျ ။ “ အား…အိုး……” အလုံးတုတျတဲ့ ဒဈကားကွီးသညျ စောကျဖုတျထဲကို မဆနျ့မပွဲကွီး တိုးဝငျလာလို့ အိပုံ့ အျောမိသှားသညျ ။ အို…အမတေော့ ကွားတော့မှာဘဲ … လီးတုတျကွီး ဆကျတိုကျ တထဈထဈနဲ့ ဝငျလာလို့ ခံစားရတာတှကေို အသံမထှကျစခေငျြလို့ အံကွိတျပွီး ခံလိုကျသညျ ။ သူ့ဟာကွီးကလညျး ကွီးလိုကျတာ….။ နာလညျးနာ ကောငျးလညျးကောငျး..နာကောငျးကွီး…..။ဒျေါဝိုငျးစုသညျ ကွားနရေတဲ့ အသံတှကွေောငျ့ စိတျတှေ အရမျး လှုပျရှားနသေညျ ။ အိပျရာကနေ ထထိုငျလိုကျမိပွီး နားစှငျ့ထောငျနမေိရာက သမီးအိပုံ့ရဲ့ တဟငျ့ဟငျ့ တအငျးအငျး ညညျးသံတှေ က ပို ကယျြလာတဲ့အတှကျ ဝလေကွီးနဲ့ သမီး အိပုံ့တို့ ဘာတှေ လုပျနကွေတယျ ဆိုတာကို မကျြစိနဲ့ တပျအပျ မွငျခငျြတှခေ့ငျြစိတျတှကေ ထိနျးလို့ မရအောငျ ပျေါပေါကျလာသညျ ။
ခွဖြေားထောကျ နငျးပွီး သမီး အိပုံ့နဲ့ ဝလေကွီးတို့ ရှိနတေဲ့ တဖကျ အိပျခနျးဖကျကို လြောကျသှားလိုကျမိရငျး အထဲကို ခြောငျးကွညျ့လိုကျသညျ ။ သမီးနဲ့ သမီး ခဈြသူတို့ ကာမစပျယှကျကွတာကို မခြောငျးကွညျ့သငျ့မှနျး သိရကျနဲ့ ထကွှလာတဲ့ ကာမစိတျတှကေို မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ ခြောငျးကွညျ့မိပွီ ။ ဝလေကွီးနဲ့ အိပုံ့တို့သညျ ကုတငျပျေါမှာ မိမှေးတိုငျး ကိုယျတုံးလုံးကွီးတှနေဲ့ ထပျရကျကွီး ကာမပှဲကို နှဲဆငျနေ ကွတာကို ဒျေါဝိုငျးစု ဘှားဘှားကွီး မွငျလိုကျရလို့ ဒူးတှေ မခိုငျတော့ဘဲ ယိုငျကာလဲသှားတော့ မတတျ ဖွဈရလို့ ဘေးက နံရံကို လကျနဲ့ ထိနျးကာ ကိုငျလိုကျရသညျ ။ ဖွူဖှေး အခြိုးကတြဲ့ အိပုံ့ရဲ့ ပေါငျတနျရှညျ ဖှေးဖှေးတှကေို ဖွဲကားပွီး နီညိုညို စောကျဖုတျကှဲကွောငျးကွီးထဲကို လုံးပတျတုတျတုတျ လီးရှညျကွီးနဲ့ တစှပျစှပျ ဖိသှငျး စပျယှကျနတောကို ဒျေါဝိုငျးစု ငေးစိုကျကွညျ့နမေိသညျ ။
ဝလေကွီးကို အခုလို အဝတျမပါဘဲ ကိုယျတုံးလုံးကွီး မွငျရတှရေ့တာကလညျး တကယျ့ကို စိတျလှုပျရှားစရာပါ။ အိပုံ့ရဲ့ စောကျဖုတျထဲကို ဖိလိုးနတေဲ့ သူ့လီးကွီးကိုလညျး ဒျေါဝိုငျးစု တအား ကွိုကျသှားမိသညျ။ ဒီလီးကွီးနဲ့ အ လိုးခံလိုကျခငျြစိတျလညျး ပျေါပေါကျသှားမိပွီး လကျတဖကျနဲ့ ပေါငျကွားကို စမျးအုပျ ကိုငျမိလိုကျသညျ ။ မွငျရတဲ့ မွငျကှငျးတှကွေောငျ့ စောကျဖုတျသညျ အရညျတှေ တအား ထှကျစိုနသေညျ ။ လကျခြောငျးတှကေ ဖိ ဖိပှတျနမေိသညျ ။ အိပုံ့နဲ့ ဝလေကွီးတို့ကတော့ သဲသဲမဲမဲ လိုးနကွေလို့ ဒျေါဝိုငျးစု ခြောငျးကွညျ့နတောကို သတိမမူမိကွ ။ ဝလေကွီးသညျ တငျးကွပျပွီး အိစကျစိုရှဲနတေဲ့ အိပုံ့ရဲ့ စောကျဖုတျ အရသာထူးကွောငျ့ ဆကျတိုကျ ဖိလိုးနပွေီး အိပုံ့ရဲ့ နို့ကွီးတဖကျက နို့သီးလေးကို တပွှတျပွှတျနဲ့ စို့ပေးနသေညျ ။ သူ့ဂှေးစိကွီးနှဈလုံးက လိုးထညျ့လိုကျ တိုငျး အိပုံ့ဖငျကွားကို ဘပျကနဲ ဘပျကနဲ ရိုကျခတျနသေညျ ။ လုံးပတျ တုတျတုတျလီးကွီးသညျ စောကျဖုတျပေါကျ ကဉျြးကဉျြးလေးထဲကို ဝငျထှကျနသေညျ ။
ဖှပျဘှတျဘှတျ ဆိုတဲ့ အသံတှေ တခကျြတခကျြ ထှကျသညျ ။ အိပုံ့ရဲ့ ညညျးသံအျောသံတှကေ ကယျြလှနျးနသေညျ ။ အိပုံ့သညျ တဖကျခနျးက အမေ ကွားသှားမှာကို သတိမ ထားမိတော့ဘူး ။ လီး အရသာထူးကွောငျ့ တအီးအီး တအားအားနဲ့ အျောဟဈနမေိရငျး ဝလေကွီး လိုးဆောငျ့ သမြှတှကေို ဖငျကော့ပေးကာ ခံယူနသေညျ ။ မနကေ့ တနကေုနျ ပငျပနျးသညျ ။
ညဈထေးတို့ကို နောကျယောငျခံလိုကျတာ ထမငျးတောငျ လှတျသှားသညျ ။ ညဖကျရောကျတော့ စိုးရအောငျ က ဝလေကွီး ပွနျနားအုံး..မနကျကမြှ စောစော ပွနျဆုံကွတာပေါ့ လို့ ပွောလို့ ဝလေကွီး အိမျပွနျသညျ ။ သူတို့အဖှဲ့သုံးတဲ့ ဟှနျဒါဖဈကားလေးနဲ့ အိမျကို ပွနျသညျ ။ အိမျထဲ ဝငျလိုကျတဲ့အခြိနျ အိပုံ့အမေ ဒျေါဝိုငျးစုက အိပုံ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ကြိုကျထီးရိုး ဘုရားဖူး လိုကျသှား တယျ လို့ ပွောပွသညျ ။ အိပုံ့ ဘာလုပျလုပျ သူ ဂရုမစိုကျပါ ။ သူ့ခေါငျးထဲမှာ တှေးလိုကျတာက အိပုံ့အမေ ဒျေါဝိုငျးစုနဲ့ သူနဲ့ တအိမျထဲမှာ နှဈယောကျထဲ ဆိုတာကိုပါ ။ “ သား..ထမငျးစားမလားဟငျ….အနျတီ ခူးလိုကျမယျ…..” လို့ ဒျေါဝိုငျးစုက လာမေးသညျ ။“ စားမယျ.အနျတီ..ကနြျော ရအေရငျ ခြိုးလိုကျအုံးမယျ..တနကေုနျ အလုပျမြားနလေို့ လူလညျး ခြှေးစျောနံ ပရေေ နတေယျ….” “ ဟုတျပွီ..အနျတီ စားဖို့ ပွငျလိုကျမယျနျော….” မီးဖိုခနျးဖကျဆီကို လြောကျသှားတဲ့ ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ အနောကျပိုငျး ကို ဝလေကွီး မသိမသာ ကွညျ့လိုကျမိသညျ ။
ဒျေါဝိုငျးစုသညျ တငျပါးကောငျးသညျ ။ လှသညျ ။ ဝိုငျးစကျ ဖုထှကျကော့ထှကျနသေညျ ။ ခါးကလညျး ခပျသေးသေး ။ တံတှေးကို ဂုကနဲ မွိုခမြိရငျး ဝလေကွီး ရခြေိုးခနျးဖကျကို တဘကျလေး ပုခုံးပျေါ တငျပွီး ထှကျသှားလိုကျသညျ ။ ဝလေကွီးက ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ ကိုယျလုံးတှကေို ပဈမှားမိနသေလို မီးဖိုထဲ စားဖို့ ပွငျဆငျနတေဲ့ ဒျေါဝိုငျးစု မှာလညျး သမီး မရှိတဲ့အခြိနျ ဝလေကွီးနဲ့ သူနဲ့ နှဈယောကျထဲ ဆိုတာကို ရငျခုံ စိတျလှုပျရှားနပေသေညျ ။ ဝလေကွီးနဲ့ တအိမျထဲ နနေတော သမီးအိပုံ့နဲ့ ဝလေကွီးတို့ ခဈြတငျးနှီးနှော ခဈြဗွူဟာခငျး ကွတာတှကေို သူမ အမွဲ ကွားနရေလို့ အကွိမျကွိမျဘဲ သူတို့လုပျကွတာကို ခြောငျးကွညျ့မိခဲ့သညျ ။ တခါမှာ သူမ ခြောငျးနတော ကို ဝလေကွီး သိသှားသညျ ။ ဝလေကွီး သညျ သူမ စိတျဝငျစားသညျ ကို သိသှားသညျ ။
တနနေ့ေ့ ဝလေကွီးသညျ သူမကို လာကွံစညျလိမျ့မညျ လို့ ဒျေါဝိုငျးစု ထငျမိနသေညျ ။ အခုလညျး ဒီကောငျကွီး ရသှေားခြိုးနသေညျ ။ ခါတိုငျးလိုဘဲ ကိုယျတုံးလုံးကွီး ခြိုးမှာ သခြောသညျ ။ သူရခြေိုး တာကိုလညျး ဒျေါဝိုငျးစု ခြောငျးဖူးသညျ . .။ သူ့ငပဲကွီးက နညျးနညျးနောနော မဟုတျဘူး ။ သမီးအိပုံ့ ဒါကွီးကို ခံနိုငျတာကို ဒျေါဝိုငျးစု အံ့သွသညျ ။ ဒီလီးကွီးကို သဘောကမြိပွီး ကိုယျ့ဖါသာ ပှတျမိရတာက ခဏ ခဏ..။ အခုလညျး သူ့ကို ကိုယျတုံးလုံး အနအေထားနဲ့ မွငျခငျြစိတျတှေ ပျေါနသေညျ ။ သှားခြောငျးခငျြနသေညျ ။ စိတျတှကေို အရမျးကို ခြိုးနှိမျ ခြုပျတီးထားနရေသညျ ။ ဒါပမေယျ့ သမီး မရှိတုံး ခြောငျးရတာက ပို လှတျလပျတာ မို့ ခွထေောကျတှကေ အလိုလို ရခြေိုးခနျးဖကျကို ဦးတညျသှားမိနသေညျ ။ ခြောငျးနကြေ အပေါကျလေးကနေ ရခြေိုးခနျးထဲမှာ တဘှမျးဘှမျးနဲ့ ရခေပျခြိုးနတေဲ့ ဝလေကွီး ကို ခြောငျးကွညျ့လိုကျသညျ ။
အို…. ဒျေါဝိုငျးစု တကိုယျလုံး ကွကျသီးတှေ တဖနျြးဖနျြး ထသှားရသညျ ။ သူမ မွငျခငျြနတေဲ့ ဝလေကွီး ရဲ့ လိငျတနျ ဆာကွီးသညျ မတောငျသေးတာတောငျ လုံးပတျတုတျတုတျနဲ့ အရှညျကွီး တရမျး၇မျး ဖွဈနတောကို တှလေို့ကျရ လို့ ခံခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှား ဖွဈပျေါမိသှားရသညျ ။ ဖွဈခငျြရာဖွဈ ဝလေကွီးနဲ့ လိုးလိုကျခငျြမိသညျ ။လကျတဖကျက အလိုလို ပေါငျကွား ဂှဆုံနရောကို ရောကျသှား ရသညျ ။ ဖေါငျးကွှတဲ့ ယားနတေဲ့ အရညျတှေ စိုစိုရှဲနတေဲ့ စောကျဖုတျကို ကိုငျမိသှားရသညျ ။ ဝလေကွီးသညျ ရခြေိုးပွီးသှားလို့ တဘကျကွီးနဲ့ ကိုယျကို ပှတျတိုကျရငျး ပုဆိုးကို အမွနျဝတျလိုကျသညျ ။
ဟာ..သူ ထှကျလာတော့မယျ….. ဒျေါဝိုငျးစုလညျး ခြောငျးကောငျးကောငျးနဲ့ ခြောငျးနတော ဝလေကွီး ထှကျလာတော့မှာမို့ ကဗြာကရာ ကုနျးနရော က ထလိုကျပွီး မီးဖိုဖကျကို ပွေးသှားလိုကျသညျ ။ ဘယျလိုဘဲ ဖွဈဖွဈ ဝလေကွီးသညျ ဒျေါဝိုငျးစု ရခြေိုးခနျးဖကျက မီးဖိုဖကျကို ပွေးသှားတာကို မွငျလိုကျသညျ ။ “ ဟငျ…..ဘာလို့ ပွေးတာလဲ..ရခြေိုးခနျးဖကျမှာ ဘာလာလုပျသလဲ..သူ ငါ့ကို လာခြောငျးကွညျ့တာလား….” ဝလေကွီးလညျး အဝတျမလဲတော့ဘဲ မီးဖိုခနျးဖကျကို လြောကျသှားလိုကျသညျ ။ ဒျေါဝိုငျးစုသညျ နှေးထားတဲ့ ပဲဟငျးတှကေို ဇလုံအသေးစားလေးထဲကို လောငျးထညျ့နသေညျ ..။ ဝလေကွီးကို ကြောခိုငျးထားသညျ ။
ဟငျ..ထမိနျ အောကျဖကျ တငျပါးကွီးတှအေနားမှာ အရညျကှကျကွီး ပါလား ။ တောကျ..အနျတီဝိုငျးစု စိတျတှေ တအား လာနတော ဖွဈမညျ ။ “ လာ…သား..စားကွရအောငျ….” ဒျေါဝိုငျးစုသညျ ချေါသာချေါသညျ ။ မကျြလုံးခငျြး မဆုံအောငျ လှဲကာထားသညျ ။ နညျးနညျး တုနျတုနျရီရီ ဖွဈ နတေဲ့ပုံ ရှိသညျ ။ သခြောသလောကျဘဲ..။ငါ့လီးကို တှခေ့ငျြလို့ လာခြောငျးတာ …။ ( အနျတီ….အနျတီ့ကို ပွောစရာ ရှိလို့….) ဝလေကွီးရဲ့ အသံက အကျကှဲကှဲနဲ့ ။ ( ဘာမြားလဲ သားရယျ……) ( ကနြျော..ကနြျော…..အနျတီ့ကို ခဈြမိနတေယျ….) ဒျေါဝိုငျးစု မအံ့သွပါ ။ သူကလညျး ဝလေကွီးကို တပျမကျသဘောကနြတောဘဲလေ ။ ( မဖွဈသငျ့ဘူး ထငျတာဘဲ မောငျဝလေရယျ……) ( ကနြျော အနိတီ့ကို အိပုံ့နဲ့ မဖွဈခငျထဲက ခဈြနမေိတာ..) ဝလေကွီးလညျး ဒျေါဝိုငျးစုကို ဖကျလိုကျပွီး နှုတျခမျးတှကေို စုတျပဈလိုကျပါပွီ ။ဒျေါဝိုငျးစုလညျး မဖွဈသငျ့ဘူးဆိုပွီး အတငျးထိနျးခြုပျနခေဲ့ရတာနဲ့ တဏှာကွှပွီး စိတျမထိနျးနိုငျတာနဲ့ လှနျဆှဲနခေဲ့ရာက ဝလေကွီးက အတငျးဖကျ အတငျး နမျးလိုကျတော့ ထိနျးခြုပျခဲ့တာတှေ လှတျထှကျသှားပွီ ။ ဝလေကွီးကို တုံ့ပွနျ နမျးပွီး တငျးတငျးကွပျကွပျ ပွနျဖကျလိုကျမိသညျ ။
ဝလေကွီးရဲ့ လြာကွီးက ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ ပါးစပျထဲက လြာကို ထိုးကစားနသေညျ ။ သူ့လကျကွီးတှကေ ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ စှငျ့ကားလုံးကော့နတေဲ့ တငျပါးကွီးတှကေို အားရပါးရ ကိုငျဆုပျနသေညျ ။ ဒျေါဝိုငျးစုသညျ သမီးအိပုံ့နဲ့ အပီလိုး လိုးနတေဲ့ ဝလေကွီးကို စိတျလာနမေိတာ ကွာပွီ ဆိုတော့ အခုလို ပှငျ့လငျးသှားပွီ ဆိုတာနဲ့ သူကိုငျတာတှကေိုလညျး တအား သဘောကမြိသညျ ။ ကနြေပျနသေညျ ။ “ ခဈြတယျ..အနျတီရယျ……” “ အနျတီလညျး သားကို ခဈြပါတယျကှယျ…..” ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ ဝမျးပဉျြသား ခပျစူစူလေးကို ဝလေကွီးရဲ့ မာတောငျ့နတေဲ့ ဒုတျကွီးက လာထောကျနသေညျ ။ ဒါကွီးကို စှဲလနျးမိခဲ့တာ ကွာနပွေီ ။ ဟနျမဆောငျနိုငျတော့ဘဲ ဒီဒုတျကွီးဆီကို ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ လကျက ရောကျသှားရသညျ ။
“ သားရယြ…အနတြီတို့ မှားနကှသေလားကှာ…..” လို့ ပါးစပကြသာ ပှောနသညြေ ။သူမလကကြတော့ ပုဆိုးပြေါ ကနေ ဒုတမြာမာကှီးကို ပှတသြပနြမေိသညြ ။ “ မမှားပါဘူး..အနတြီရယြ..ခစွမြိတာတော့ ဘယတြတနြိုငမြလဲ….ကနွောကြ အနတြီ့ကို အိပုံ့ထကြ အရငတြောငြ ခစွမြိတာပါ…..” ဝလကှေီးရဲ့ လကတြဖကကြ ဒေါဝြိုငြးစုရဲ့ ပေါငဂြှဆုံနရောကို စမြးလိုကသြညြ ။ “ ဟုတလြို့လား….” “ ဟုတတြယြ….အနတြီ့ကို အရမြး စှဲလနြးနတော….” “ ယုံပါဘူး….အို့..” ဒေါဝြိုငြးစုရဲ့ စောကဖြုတအြကှဲကှောငးကို လကခြွောငြးတှနေဲ့ ပှတဆြှဲလိုကလြို့ ဒေါဝြိုငြးစု တှန့တြုနသြှားသညြ ။ ဝလကှေီးက သူမကို အိပခြနြးထဲကို ဆှဲခေါသြှားသညြ ။
ကြှတျလုလု ထမိနျကို စှနျတောငျဆှဲလို့ ဝလေကွီးရဲ့ အနောကျကနေ ပါသှားတဲ့ ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ ပေါငျကွား တဝိုကျမှာ အရညျတှနေဲ့ စိုစိုရှဲနပွေီ ။ “ သားရယျ….ကွမျးလိုကျတာ…..” “ သားလို့ မချေါနဲ့တော့….” “ မငျးက သားမကျလောငျးမို့ပါကှယျ….” “ ဟငျး..အခု လငျ ဖွဈတော့မယျ…အနျတီ….မောငျလို့ဘဲ ချေါတော့….” ဝလေကွီးသညျ ဒျေါဝိုငျးစုကို ဖွုတျခငျြနတော ကွာပွီ ။ အခုလို အခှငျ့အခါကောငျးတဲ့အခြိနျမှာ လကျမလှတျတော့ ။ ကုတငျပျေါ အတကျမှာထဲက ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ ကိုယျပျေါက အဝတျအစားတှကေို အကုနျလုံး ခြှတျပဈလိုကျပါသညျ ။ သူ့ခါးဝတျ.ပုဆိုးကိုလညျး ခြှတျခပြဈလိုကျတော့ နှဈယောကျစလုံး ဗလာကိုယျတှနေဲ့ ဖွဈကုနျသညျ ။ “ လာ အနျတီ..ကနြျော အနျတီ့ကို နမျးပေးမယျ…နမျးခငျြနတော ကွာလှပွီ…..” ဒျေါဝိုငျးစုက သူမ နှုတျခမျးကို စုတျမညျ လို့ ထငျလိုကျပမေယျ့ ဝလေကွီးက သူ့ခေါငျးကို ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ ကိုယျ အောကျပိုငျးကို ဆငျးခသြှားလို့ ဟဲ့ဟဲ့…ဘာလုပျမလို့လဲ လို့ လနျ့သှားပွီး ပေါငျတနျတှကေို ပူးစဖေို့ ကွိုးစား လိုကျလသေညျ ။
ဝလေကွီးက ပေါငျတနျတှကေို ဆှဲဖွဲကားလိုကျပွီး အမှေးပါးပါး နဲ့ စောကျဖုတျဖေါငျးကွီးကို အား ရပါးရ နမျးလတေော့သညျ ။ “ အို..ဟာ…အငျ….သား…သား…..ဘုနျးနိမျ့ကုနျပါ့မယျကှာ…..” ဝလေကွီးက အကှဲကွောငျးကို သူ့နှာခေါငျးထိပျနဲ့ အစုနျအဆနျ ပှတျဆှဲသညျ ။ “ အို..ဟငျ…..အာ…….သား..ကောငျလေး..မငျး…မငျး သိပျဆိုးတယျ……” ပါးစပျက ဆိုးတယျလို့ ပွောနပေမေယျ့ သူ့စိတျထဲက သဘောကနြသေညျ ။ ကွိုကျနသေညျ ။ နှာခေါငျးပွီးတော့ လြာကွီး….။ လြာအပွားလိုကျကွီးနဲ့ စောကျဖုတျကို ဝလေကွီး ယကျနသေညျ ။ ဒျေါဝိုငျးစု တ အား အျောညညျးတော့သညျ ။
“ အိုး…သား……အမလေး……ဘာတှေ လုပျနတောလဲကှာ…..အား…….အူး…..အာ…အာ…..အို…..အမလေးလေး..” ပွတျပွတျ ပွိပွိ အသံတှေ ထှကျနသေညျ ။ ဝလေကွီးရဲ့ ဘာဂြာသံတှေ သောသောညံနသေညျ ။ “ အို…အီး……အီး…..အား…..အား……အား…….အား…..” ဝလေကွီးသညျ အသကျကွီးပမေယျ့ မပကျြစီးသေးတဲ့ စောကျဖုတျလှလှကွီးကို ယကျလညျးယကျ စုတျလညျး စုတျသညျ ။ “ အမလေး..သားရယျ…..အိုးဟိုးဟိုး……အူး……..အူး…..” စောကျစိကို အစုတျခံလိုကျရလို့ ဒျေါဝိုငျးစု ဖတျြဖတျြလူးသှားသညျ ။ တုနျခါသှားသညျ ။ ဝလေကွီးရဲ့ ခေါငျးကို လညျး ဖမျးကိုငျလိုကျမိသညျ ။ ဝလေကွီးသညျ အနံ့အသကျ မရှိတဲ့ စောကျဖုတျကွီးကို စိတျထဲက သဘောကသြှားသညျ ။ ဒီမိနျးမ သနျ့ရှငျး သညျ လို့လညျး မှတျခကျြခလြိုကျပွီး တပွတျပွတျ နဲ့ ဆကျ ယကျပေးလသေညျ ။ ဒျေါဝိုငျးစုလညျး မခံဘူးတဲ့ ဘာဂြာအယကျအစုတျတှကေို ခံရလို့ တအား စိတျလှုပျရှားနသေညျ ။
လငျဖွဈသူက တခါမှ ဒါမြိုး မလုပျပေးဖူးခဲ့ဘူး ။ သားမကျလောငျးနဲ့ ဖွဈပကျြမိလို့ ရှကျသလိုလို စိတျမကောငျးဖွဈသလိုလို ဝမျးနညျးသလိုလို ဖွဈနမေိခိုကျ ဝလေ ကွီးက ဘာဂြာမှုတျတာကို ရုတျခညျြး ရပျပဈလိုကျပွီး သူမ ကိုယျပျေါကို တကျလာလို့ “ သား….မကောငျးဘူး ထငျတယျကှယျ…အနျတီတို့ ရပျလိုကျကွရအောငျကှယျ….” လို့ ပွောလိုကျသညျ ။ သို့ပမေယျ့ ဝလေကွီးသညျ သူမပွောစကားကို နညျးနညျးမှ ဂရုမစိုကျ ။ နားမထောငျ ။ သူ့ဒုတျတုတျတုတျကွီး ကို အရညျတှေ တအားရှဲနတေဲ့ စောကျဖုတျထဲကို ဖိသှငျးလိုကျပါသညျ ။ ဒီအထိအတှကေို့ သူမ လိုလားနခေဲ့တာ လငျသကေထဲကပါဘဲ ။
တအားကို ယားပွီး လီး ဆာနခေဲ့တာပါ ။ အခုတော့ သူမလိုအငျကို ဖွညျ့ပေးမယျ့သူ က ရှိနပွေီ ။ သမီးလညျးလိုး အမလေညျးလိုးတဲ့ ငလိုးကောငျကွီး ဝလေက သူ့လီးတုတျတုတျနဲ့ ဖိသှငျးပေးနေ ပွီ ။ “ အိုး……အီး…..” လီးထိပျခေါငျး မှိုပှငျ့အျောလံကွီး ပွိကနဲ တငျးကနဲ စောကျဖုတျထဲ အောငျးလာလို့ သူ့ကို လှမျးဖကျပွီး ပေါငျတနျ တှကေို ဖွဲကားပေးလိုကျမိသညျ ။ လီးသညျ တုတျလှသညျ ။ ရှညျလညျး ရှညျသညျ ။ စောကျခေါငျးနံရံသားတှကေို တအား ပှတျတိုကျသှားတဲ့ အထိ အတှကေ့ သူမကို ဆတျဆတျခါ ကောငျးသှားစသေညျ ။
“ အိုး…….အား….” ဝလေကွီး သညျ ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ စောကျဖုတျသညျ ဒီလောကျ တငျးကွပျလိမျ့မယျ လို့ မထငျထားခဲ့။ မိနျးမတှသေညျ အရငျက အတှအေ့ကွုံ ရှိခဲ့ငွားလညျး ကွာရှညျ လိငျဆကျဆံတာ မရှိခဲ့ရငျ စောကျဖုတျပေါကျသညျ အသားတကျပွီး ပွနျကွပျလာသညျ ဆိုတာကို သူ လကျတှေ့ သိလိုကျရသညျ ။ အရသာထူးလှတဲ့ တငျးကွပျအိနတေဲ့ ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ စောကျဖုတျထဲကို လီးတနျ တဆုံး ထိုးသှငျးလိုကျရငျး သူမ ရဲ့ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငျသားကွီးနှဈလုံးကို သူ့မကျြနှာနဲ့ ပှတျလူး နမျးရှုံ့လသေညျ ။ လီးတနျတဆုံး ဝငျလာလို့ အီးကနဲ အျောမိရငျး သူ့လကျမောငျးနှဈဖကျကို လှမျးဆုပျလိုကျမိတဲ့ ဒျေါဝိုငျးစုသညျ လီးတနျကွီး အနောကျကို ထုတျဆုတျသှားပွနျလို့ ရငျထဲ ဟာတာတာကွီး ဖွဈသှားရပွနျသညျ ။
ဝလေကွီးသညျ ကွပျပမေယျ့ လိုးလို့ရနပွေီ ဖွဈတဲ့ စောကျဖုတျ အကောငျးစားကွီးကို တခကျြခငျြး လိုးနပေါပွီ ။ တငျးကနဲ တထဈထဈနဲ့ ဝငျသှားလိုကျ စီးကနဲ ပွနျဆုတျလိုကျနဲ့ တခကျြခငျြး မှနျမှနျ သှငျးပေးထုတျပေးနတေဲ့ စံခြိနျမှီ လီးတုတျကွီးကို ဒျေါဝိုငျးစု အစှဲကွီး စှဲသှားရပါပွီ ။ ကောငျးလိုကျတာ သားရယျ…..။ တိုးတိုးလေး ပွောလိုကျတဲ့ ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ နို့သီးခေါငျး မာမာလေး တဖကျကို စုတျနရေငျး ဖငျကော့ညှောငျ့ထညျ့ ပေးနသေညျ ။ ဝလေကွီးလညျး လိုးလို့ ကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ အရသာထူးကဲပွီး ပွီးခငျြခငျြ ဖွဈလာသညျ ။ ဒျေါဝိုငျးစုမှာတော့ တျောတျောကွာ ပွတျလပျခဲ့တဲ့ ကာမစညျးစိမျတှကေို ပွနျရလိုကျတာမို့ နှဈကွိမျတောငျ လမျး ဆုံး ပနျးတိုငျကို တကျရောကျပွီးသှားသညျ ။
လိုးဆောငျ့ခကျြတှကေ ကောငျးလှနျးလို့ အောကျကနေ ပငျ့လိုကျ ကော့လိုကျနဲ့ တုံ့ပွနျနမေိသညျ ။“ ကောငျးလား အနျတီ…” “ ကောငျးတယျ…ဟငျး…တအား ကောငျးတယျ…သားရယျ….” ဖပျဖပျဖပျ ဖပျဖပျဖပျ ဖပျဖပျဖပျ ဆီးခကျြမှနျမှနျ ရိုကျခတျနတေဲ့ အသံတှနေဲ့ ညညျးအျောသံတှေ ထှကျနသေညျ ။ “ အနျတီ…တခု လုပျပေးမလားဟငျ….” “ ဘာလဲသား..လုပျပေးမယျလေ…ဘာလိုလဲ…” “ ပုံစံပွောငျးပွီး လုပျခငျြလို့….” “ သားက အနျတီ့ကို ဘယျလို ပုံနပေေးစခေငျြလို့လဲဟငျ…..” “ ဖငျပူးတောငျး ထောငျပေးမလား….” ဒျေါဝိုငျးစုသညျ သူမကို စောကျဖုတျလညျး ယကျပေး..၂ကွိမျ ပွီးအောငျလညျး လိုးပေးထားတာမို့ သူလိုခငျြတဲ့ ပုံစံကို ခကျြခငျြးဘဲ နပေေးလိုကျပါသညျ ။
ဖငျဝိုငျးစကျစကျ ဖွူဖှေးဖှေးကွီးတှကေ ထောငျထားလို့ ပိုလှသလိုဘဲ ။ ဖငျတှကွေားက ပွူးထှကျနတေဲ့ စောကျဖုတျဖေါငျးဖေါငျးကွီးက ပိုလို့တောငျ လှနသေညျ ။ “ လှလိုကျတာ အနျတီရယျ…..” “ ဘာ…..” “ အနျတီ့စကျေဖုတျက တအားလှလှနျးလို့..” “ ကွံကွံစညျစညျကှယျ….ဟငျးဟငျး….အနျတီ ရှကျလာပွီကှာ…..” “ မရှကျပါနဲ့ဗြာ….အနျတီ့ဖငျကွီးတှကေို ကွညျ့ရငျး အနျတီ့စောကျဖုတျလှလှထဲကို ကနြေျာ့လီး ဝငျထှကျနတောကိ ကွညျ့ရငျး လိုးလိုကျအုံးမယျ….” “ မငျးလေး..စကားပွော သိပျ ပကျစကျတာဘဲကှာ..အနျတီ နားရှကျတယျ….ဟှနျး….” ဝလေကွီး ဆှဲပွီ ။ သူ့လီးတနျကို စောကျဖုတျထဲ ဖိသှငျးထညျ့လိုကျပွီး တစှပျစှပျ မွညျအောငျ ဆောငျ့လိုးလေ သညျ ။ကောငျးလိုကျတဲ့ အရသာ….။
ဒေါဝြိုငြးစုလညြး တဟငြးဟငြးနဲ့ ဖငကြှီးထောငပြေးရငြး ခံနသညြေ ။ ဝလကှေီးရဲ့ လီးတုတတြုတရြှညရြှညကြှီးက လညြး တအား ဆောင့ထြည့နြသညြေ ။ သူ့ေ၈ှးစိကှီးတှကေ သူမရဲ့ ဖငကြှားထဲကို တဖတဖြတနြဲ့ ရိုကခြတလြို့ နသညြေ ။ ဖပဖြပဖြပြ…….. ဖပဖြပဖြပြ…ဖပဖြပဖြပြ…အား…….အား…….အူး……..အမလေး…….အား……..အီး……… ကာမစညြးစိမကြို နှဈယောကစြလုံး ခံစားနကှရေငြး ဝလကှေီးသညြ ကောငြးလှနြးတဲ့ အရသာကှောငြ့ သုတြ ရညတြှကေို တဖပဖြပနြဲ့ ပနြးထုတလြိုကရြငြး ပှီးခှငြး ပနြးတိုငကြို တကလြှမြး ရောကလြို့သှားလသညြေ ။..
ဝေလကြီးသည် အိပုံ့တို့ သားအမိ ကို သူ့အိမ်မှာ ခေါ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဟိုတုံးကလို လမ်းဘေး ထမင်းဆိုင်တွေမှာ ကြုံသလို စားနေရတဲ့ ဘဝမျိုးကနေ ကင်းဝေး လွတ်မြောက်သွားသည် ။ အိပုံ့တို့ သားအမိသည် ထမင်းဟင်းတွေ ချက်ပြီး သူ့ကို ဂရုတစိုက် အမြဲကျွေးနေလို့ သူသည် ဝေလကြီး ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဝတုတ်ပြဲကြီး ဖြစ်လာတော့မည် လို့ စနေမက နောက် သည် ။ ဝေလကြီးသည် တကောင်ကြွက် ဘဝနဲ့ တယောက်ထဲ နေလာခဲ့သူ တယောက် ဖြစ်လို့ အိပုံ့တို့ သားအမိ သူနဲ့ လာနေတာကို ကျေနပ် သဘောကျနေသည် ။အင်း အိပုံ့ကို စတွေ့ကထဲက သူ သဘောကျခဲ့တာ ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်း အိပုံ့ရဲ့ အမေကို တွေ့လာတော့ ချောချောဖြူဖြူ နဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေနဲ့ အိပုံ့အမေ ကိုလည်း သူ သဘောကျမိပြန်သည် ။ သူတို့ သားအမိနဲ့ တအိမ်ထဲ နီးနီးကပ်ကပ် နေနေရတဲ့ အခါ ဝေလကြီးရဲ့ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန် နိုးကြွနေခဲ့သည် ။ အိပုံ့ကလည်း ဝေလကြီး စလိုက်ရင် လက်ခံမယ့် ပုံစံ ရှိနေသည် ။ သမီးရော အမေရော သူ သဘောကျနေမိသည် လို့ ဆရာစိုးနဲ့ ဆုံခိုက် ရင်ဖွင့်လိုက်သည် ။ ဆရာစိုးက တဟားဟား ရယ်သည် ။ “ မင်း တော်တော် အားကြီးတဲ့ကောင်ဘဲ….ဟီး…လုပ်ကွာ…..ချသာချ…..” လို့ ပြောသည်။
အားပေးသည် ။ မြှောက်ပေးသည် ။ဒီနေ့ ဝေလကြီး အိမ်ပြန်နောက်ကျသည် ။သူတို့အဖွဲ့သည် အထက်က ညွှန်ကြားချက်အရ “ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းကြီး ” တဂိုဏ်းကို “ လိုက် ”နေရသည် ။ ကွင်းဆက်တွေကို တခုချင်း သေသေချာချာ လိုက်နေသည် ။ တခါထဲ မိရာကို မဖမ်းပစ်လိုက်သေးဘူး ။ ခေါင်းဆောင်သူတွေ နောက်ကွယ်က အားပေးကူညီနေသူတွေကိုပါ သိချင်တဲ့အတွက် ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားပြီး စောင့်ကြည့်နေကြသည် ။ သူတို့အဖွဲ့ထဲက ဘကြီးခိုင်နဲ့ ဘုလက်တို့က ညဖက်ပါ တာဝန်ယူပြီး နောက်ယောင်ခံလိုက်..စောင့်ကြည့်တာဝန် ကို ဆက်ယူနေသည် ။ ဝေလကြီးကိုတော့ ဒီည ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်သည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိပုံ့ရဲ့ အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစု အိပ်နေပြီ။ အိမ်တံခါးကို အိပုံ့က လာဖွင့်ပေးသည် ။ အိပုံ့လည်း အိပ်ရာထဲက ထလာပုံရသည် ။ ဆံပင်ဖရိုဖရဲနဲ့ အိပ်မှုံစုံမွှား အိပုံ့သည် ကရိုကရိုနဲ့ တမျိုးလေး လှနေသည်။
“ အကို..ထမင်း စားအုံးမလားဟင်…” လို့ လေသံလေးနဲ့ မေးလိုက်တဲ့ အိပုံ့သည် ဝေလရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တအား လှနေသည် ။ ချစ်စရာကောင်းနေသည် ။ ဘိုက်က ဒီလောက် မဆာပေမယ့် အိပုံ့ ပြင်ကျွေးတဲ့ ညစာကို သူနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နှစ်ယောက်ထဲ စားချင်တဲ့ အတွက် “ အင်း စားမယ်…အိပုံ့ကော စားပြီးပြီလား…” လို့ မေးလိုက်သည် ။ အိပုံ့က ရယ်သည် ။ “ အကိုက လည်း..အချိန်ကိုလည်း ကြည့်ပါအုံး…ညနက်လှပြီ..အိပုံ့..အမေနဲ့ ညနေထဲက စားပြီးပြီ..အကိုရဲ့..လာ….အကို့ ကို ဟင်းနွှေးပေးမယ်…” လို့ ပြောပြီး မီးဖိုခန်းထဲကို ဦးဆောင်ပြီး အရှေ့က သွားလိုက်တဲ့ အိပုံ့ရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က တင်လှလှတွေကို သူ အငမ်းမရ ကြည့်လိုက်မိသည် ။ဟူး…ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုး…။ တုန်ခုံနေကြသည်။
သူ ထမင်းစားတာကို ဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ အိပုံ့သည် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပြုံးတဲ့ အပြုံးလေးမျိုးနဲ့ ။ ဝေလကြီး ထမင်း ဆက် မစားနိုင်တော့ ။ “ ဟင်….တော်ပြီလား..ဘာလဲအကို..ဝိတ်လျော့နေလို့လား…..” “ ဟင့်အင်း….မစားနိုင် မအိပ်နိုင်တာ ကြာပြီ…..” “ ဘာလို့လဲဟင်..မနေ့ညတုံးက အကို အိပ်နေတာမှ သိုးလို့…ဟုတ်လို့လား……” “ ဟုတ်တယ်…..အကို့မှာ ဝေဒနာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားနေရတယ်..အိပုံ့…” “ ဟယ်..ဘာဖြစ်လဲ အကို..ဘိုက်အောင့်တာလား….” “ မဟုတ်ဘူး…..” သူ စားထားတဲ့ ပုဂံခွက်ယောက်တွေကို သိမ်းပေးနေတဲ့ အိပုံ့အနားကို တိုးကပ်သွားလိုက်သည်။
“ ဟင်..အကို..ဘာလိုချင်လဲဟင်…” “ အကို လိုချင်တာကို ပေးမှာလား….” “ အကိုက ဘာလိုချင်လို့လဲ….” “ အိပုံ့ရဲ့ …. အချစ်…” “ အို..အကိုကလည်း……” အိပုံ့ မျက်နှာလေး ရဲတွတ်သွားသည် ။ အိပုံ့ခါးသေးသေးလေးကို ဆွဲကာ ဖက်လိုက်သည် ။ သူ့ရင်ခွင်ထဲကို အိပုံ့ ရောက်လာသည် ။ အရင်ဆုံး နဖူးဝင်းဝင်းလေးကို နမ်းလိုက်သလား ။ နှာခေါင်းလေးကို နမ်းမိသလား ။ မသိလိုက် ။ အနမ်းတွေက အိပုံ့ရဲ့ မျက်နှာ အနှံ့မှာ ။နောက်ဆုံး သိလိုက်တာက အိပုံ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖေါင်းအိအိလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ နဲ့ စုတ်နေမိပြီ ဆိုတာကိုပါဘဲ ။ အိပုံ့မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်သွားသည် ။ နှုတ်ခမ်းတွေက တော်တော်နဲ့ ခွာလို့ မရပေမယ့် ခွာခွာချင်း သူက “ သိပ်ချစ်တယ်…အိရယ်…” လို့ ပြောလိုက် သလို အိပုံ့ကလည်း “ အတူတူဘဲ အကို..အိလည်း အကို့ကို သိပ်သိပ်ချစ်တယ်….” လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည်။
ပွင့်လင်းတဲ့ အိပုံ့ကို သူ တအား သဘောကျသွားသည် ။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားကြတော့ ကိုယ်အရှေ့ ပိုင်းချင်း ပူးကပ်ထိတွေ့နေသည် ။ အိတင်းတင်း ရင်စိုင်တွေက သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ဖိကပ်မိနေသည် ။ သူ့လက်တ ဖက်က အိပုံ့ရဲ့တင်ပါးအိအိတွေ အပေါ်ကို ရောက်နေသည် ။ နှုတ်ခမ်းချင်း ပြန်ပူးကပ် စုတ်မိကြပြန်သည် ။ လက်က အလိုလို အိပုံ့ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်နေမိသည် ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကျန်းမာရေး …။ တောင့်လိုက်တဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေ ။ ဝေလကြီးရဲ့ လက်ဖဝါးတွေက အပီကို ဆုပ်နယ်ကိုင်တွယ်နေမိသည် ။ အိပုံ့လည်း သူ့လိုဘဲ ကာမရာဂစိတ်တွေ ထကြွနေပြီ ။ သူ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားပြီး သူ စုတ်နမ်းတာတွေကို ပြန်တုံ့ပြန်နေသည် ။ အိပုံ့သည် ဝေလကြီးရဲ့ အနမ်း အထိအတွေ့တွေကြောင့် ဝေလကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ပျော့ကျခွေယိုင်သွားသည် ။ ကာမစိတ်တွေ တအား ထကြွနေတာကြောင့် ဝေလကြီး ပြုသမျှ ခံဖို့ သူမကိုယ်ကို ပေးအပ်လိုက်ပြီ ။ ဝေလကြီးလည်း အိပုံ့ကို ကောက်ချီမလိုက်ပြီး ခြေလှမ်းကျဲကျဲနဲ့ သူ့အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားလိုက်သည် ။ အိပုံ့ရဲ့ အိမ်နေရင်း ဝတ်ထားတဲ့ ထမိန်နွမ်းလေးသည် ပြေလျော့နေသည်။
အိပုံ့သည် ထမိန်ကို ပြန်ချည်နှောင် ဖို့ မကြိုးစားတော့ ။ ဝေလကြီးရဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး လန်ကျနေတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ပိတ်နေသည် ။ နှုတ်ခမ်းလေး တွေက ဖူးကြွနေသည် ။ မပွင့်တပွင့်နဲ့ ဝေလကြီး ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကြီးတွေ လာ စုတ်မှာကို မျှော်လင့်နေကြသည် ။ အရင်ဆုံး ဝေလကြီးသည် အိပုံ့ရဲ့ တီရှပ်ဟောင်းလေးကို ချွတ်လိုက်သည် ။ အိပုံ့သည် သူချွတ်တာကို မကန့် ကွက်တဲ့အပြင် ကူညီပြီး ချွတ်ပေးလို့ ဝေလကြီး သဘောကျသွားသည် ။ လုံးတင်းပြီး တွဲမကျသေးတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အပျိုမ နို့လုံးကြီးတွေကို ဝေလကြီး ကြည့်ပြီး တံတွေး ဂုကနဲ မြိုချလိုက် ပြီး နှာခေါင်းကြီးနဲ့ တရှုံ့ရှုံ့ စနမ်းသည် ။ နို့သီးခေါင်း အဖုလုံးလေးတွေက မာကျော ထထောင်နေသည် ။ ကာမ စိတ်တွေ ထကြွလို့ ဖြစ်မည် ။ “ အိပုံ့ကို ချစ်လားဟင်…..” လေသံလေးနဲ့ မေးလိုက်တဲ့ အသံနဲ့ ဝေလကြီး ရဲ့ “ အင်း..အရမ်းချစ်တယ်….” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အသံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညအလည်မှာ သိသာလှလို့ တရေးနိုးလာတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစု ကြားသွားသည်။
ဟယ်…..သ…သမီးလေး….နဲ့…မောင်ဝေလ…….. နားစွင့်ထောင်လိုက်တော့ “ ပြွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်..ပြွတ်….” ဆိုတဲ့ အသံတွေကို ကြားလိုက်ရသည် ။ တဆက်ထဲမှာ ဟင်း..အင်း..ဟင်း…..ဟင်း……နဲ့ ညည်းလိုက်တဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အသံလေးတွေကိုပါ ကြားလိုက်ရသည် ။ ဟင်…..ဒါ….ဒါ…..ဒါ…..လိုးတဲ့ အသံတွေလား….. အာ…မဟုတ်လောက်ဘူး……နို့တွေကို စို့ပေးနေတဲ့ အသံတွေဘဲ ဖြစ်မယ် . . . . ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် သမီးနဲ့ ဝေလတို့ကို သွားပြီး မတားမိတဲ့အပြင် သူတို့အခန်းဆီက ကြားနေရတဲ့ အသံတွေကို သဲသဲကွဲကွဲ ကြားချင်နေတဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်နေသည် ။ အိပုံ့ရဲ့ ညည်းငြူသံတွေကို ဆက်တိုက် ကြားနေရသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း ခြေတွေ လက်တွေ ဒူးတွေ တုန်နေသည် ။ ဒီ ဝေလ ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးသည် သူ့ကို ကြည့်တဲ့ ပုံစံတွေက မရိုးခဲ့ဘူး ..။ တနေ့နေ့ သူ့ကို ကြံစည်လာလိမ့်မယ် လို့ ထင်ထားတာ။ ဝေလ ရုပ်က တဏှာထန်မယ့် ရုပ် ။ ရင်ခုံမိခဲ့တာ ။ အခု အိပုံ့ကို ကြံစည်နေပြီ ။ ဒေါ်ဝိုင်းစု အနေနဲ့ ဝေလကြီးက ကျေးဇူးရှင် ။ အိမ်ပေးနေရုံမက လုပ်ငန်းတခုခု လုပ်ဖို့ကိုလည်း ငွေရင်း မတည်ပေးမည် ဆိုတော့ သမီးလေးရော သူရော ဒီကောင်ကြီးကို ဖူးဖူး မှုတ်ထားမိကသည် ။ သူတို့ အဖွဲ့က အရမ်း သဘောကောင်းကြသည်။
အိပုံ့လေးရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုကို လည်း ပေးကမ်းကြတာတွေက မနည်းဘူး ။ သူတို့ကောင်းလွန်းတာတွေကြောင့် သူတို့ကိုလည်း အစစ ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးမည် လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ။ အိပုံ့ရဲ့ “ အား……အိုး….” လို့ အော်လိုက်တဲ့ အသံက တော်တော် ကျယ်သွားသည် ။ ကြည့်ရတာ ဝေလ အိပုံ့ကို လိုးနေပြီ ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားနေပြီး ပေါင်တန် နှစ်ဖက် ကြားက စိုစိစိ လို ခံစားမိလို့ ကျွတ်ပြေနေ တဲ့ ထမိန်ထဲ လက်သွင်းပြီး စမ်းလိုက်မိတဲ့အခါ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတာကို စမ်းမိလိုက်သည် ။ ဟယ်….ငါ….ငါ… တအားကို စိတ်တွေ လာပြီး အရည်တွေ စိုနေပါလား……။ ဝေလကြီးရဲ့ အခန်းထဲက အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းတွေ အိပုံ့ညည်းသံတွေ ဆက်တိုက်ကြားနေရသည် ။ ကုတင်မြည် သံတွေရော….။ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် တတ်နိုင်ရင် သူတို့ ဘာတွေ လုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာတွေကို ပြေးကြည့်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ပေါက် နေသည် ။ သူ လာချောင်းသည် ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ သိလို့ မဖြစ်ဘူး ။ ဝေလကြီးရဲ့ အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ…… အိပုံ့သည် ပေါင်တွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးထားသည် ။
ဝေလကြီးသည် အိပုံ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကျကျနန ယက်ပေး အပြီး စလိုးသည် ။ သူ့တုတ်ဖီးလှတဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကို အိပုံ့ရဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ စောက် ဖုတ်ပေါက်ထဲကို တေ့ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ “ အား…အိုး……” အလုံးတုတ်တဲ့ ဒစ်ကားကြီးသည် စောက်ဖုတ်ထဲကို မဆန့်မပြဲကြီး တိုးဝင်လာလို့ အိပုံ့ အော်မိသွားသည် ။ အို…အမေတော့ ကြားတော့မှာဘဲ … လီးတုတ်ကြီး ဆက်တိုက် တထစ်ထစ်နဲ့ ဝင်လာလို့ ခံစားရတာတွေကို အသံမထွက်စေချင်လို့ အံကြိတ်ပြီး ခံလိုက်သည် ။ သူ့ဟာကြီးကလည်း ကြီးလိုက်တာ….။ နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း..နာကောင်းကြီး…..။ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် ကြားနေရတဲ့ အသံတွေကြောင့် စိတ်တွေ အရမ်း လှုပ်ရှားနေသည် ။ အိပ်ရာကနေ ထထိုင်လိုက်မိပြီး နားစွင့်ထောင်နေမိရာက သမီးအိပုံ့ရဲ့ တဟင့်ဟင့် တအင်းအင်း ညည်းသံတွေ က ပို ကျယ်လာတဲ့အတွက် ဝေလကြီးနဲ့ သမီး အိပုံ့တို့ ဘာတွေ လုပ်နေကြတယ် ဆိုတာကို မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် မြင်ချင်တွေ့ချင်စိတ်တွေက ထိန်းလို့ မရအောင် ပေါ်ပေါက်လာသည် ။
ခြေဖျားထောက် နင်းပြီး သမီး အိပုံ့နဲ့ ဝေလကြီးတို့ ရှိနေတဲ့ တဖက် အိပ်ခန်းဖက်ကို လျောက်သွားလိုက်မိရင်း အထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။ သမီးနဲ့ သမီး ချစ်သူတို့ ကာမစပ်ယှက်ကြတာကို မချောင်းကြည့်သင့်မှန်း သိရက်နဲ့ ထကြွလာတဲ့ ကာမစိတ်တွေကို မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ချောင်းကြည့်မိပြီ ။ ဝေလကြီးနဲ့ အိပုံ့တို့သည် ကုတင်ပေါ်မှာ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံးကြီးတွေနဲ့ ထပ်ရက်ကြီး ကာမပွဲကို နွှဲဆင်နေ ကြတာကို ဒေါ်ဝိုင်းစု ဘွားဘွားကြီး မြင်လိုက်ရလို့ ဒူးတွေ မခိုင်တော့ဘဲ ယိုင်ကာလဲသွားတော့ မတတ် ဖြစ်ရလို့ ဘေးက နံရံကို လက်နဲ့ ထိန်းကာ ကိုင်လိုက်ရသည် ။ ဖြူဖွေး အချိုးကျတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ ပေါင်တန်ရှည် ဖွေးဖွေးတွေကို ဖြဲကားပြီး နီညိုညို စောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်းကြီးထဲကို လုံးပတ်တုတ်တုတ် လီးရှည်ကြီးနဲ့ တစွပ်စွပ် ဖိသွင်း စပ်ယှက်နေတာကို ဒေါ်ဝိုင်းစု ငေးစိုက်ကြည့်နေမိသည် ။
ဝေလကြီးကို အခုလို အဝတ်မပါဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး မြင်ရတွေ့ရတာကလည်း တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ အိပုံ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိလိုးနေတဲ့ သူ့လီးကြီးကိုလည်း ဒေါ်ဝိုင်းစု တအား ကြိုက်သွားမိသည်။ ဒီလီးကြီးနဲ့ အ လိုးခံလိုက်ချင်စိတ်လည်း ပေါ်ပေါက်သွားမိပြီး လက်တဖက်နဲ့ ပေါင်ကြားကို စမ်းအုပ် ကိုင်မိလိုက်သည် ။ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကြောင့် စောက်ဖုတ်သည် အရည်တွေ တအား ထွက်စိုနေသည် ။ လက်ချောင်းတွေက ဖိ ဖိပွတ်နေမိသည် ။ အိပုံ့နဲ့ ဝေလကြီးတို့ကတော့ သဲသဲမဲမဲ လိုးနေကြလို့ ဒေါ်ဝိုင်းစု ချောင်းကြည့်နေတာကို သတိမမူမိကြ ။ ဝေလကြီးသည် တင်းကြပ်ပြီး အိစက်စိုရွှဲနေတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ စောက်ဖုတ် အရသာထူးကြောင့် ဆက်တိုက် ဖိလိုးနေပြီး အိပုံ့ရဲ့ နို့ကြီးတဖက်က နို့သီးလေးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့ပေးနေသည် ။ သူ့ဂွေးစိကြီးနှစ်လုံးက လိုးထည့်လိုက် တိုင်း အိပုံ့ဖင်ကြားကို ဘပ်ကနဲ ဘပ်ကနဲ ရိုက်ခတ်နေသည် ။ လုံးပတ် တုတ်တုတ်လီးကြီးသည် စောက်ဖုတ်ပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို ဝင်ထွက်နေသည် ။
ဖွပ်ဘွတ်ဘွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ တချက်တချက် ထွက်သည် ။ အိပုံ့ရဲ့ ညည်းသံအော်သံတွေက ကျယ်လွန်းနေသည် ။ အိပုံ့သည် တဖက်ခန်းက အမေ ကြားသွားမှာကို သတိမ ထားမိတော့ဘူး ။ လီး အရသာထူးကြောင့် တအီးအီး တအားအားနဲ့ အော်ဟစ်နေမိရင်း ဝေလကြီး လိုးဆောင့် သမျှတွေကို ဖင်ကော့ပေးကာ ခံယူနေသည် ။ မနေ့က တနေကုန် ပင်ပန်းသည် ။
ညစ်ထေးတို့ကို နောက်ယောင်ခံလိုက်တာ ထမင်းတောင် လွတ်သွားသည် ။ ညဖက်ရောက်တော့ စိုးရအောင် က ဝေလကြီး ပြန်နားအုံး..မနက်ကျမှ စောစော ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ လို့ ပြောလို့ ဝေလကြီး အိမ်ပြန်သည် ။ သူတို့အဖွဲ့သုံးတဲ့ ဟွန်ဒါဖစ်ကားလေးနဲ့ အိမ်ကို ပြန်သည် ။ အိမ်ထဲ ဝင်လိုက်တဲ့အချိန် အိပုံ့အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစုက အိပုံ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူး လိုက်သွား တယ် လို့ ပြောပြသည် ။ အိပုံ့ ဘာလုပ်လုပ် သူ ဂရုမစိုက်ပါ ။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ တွေးလိုက်တာက အိပုံ့အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစုနဲ့ သူနဲ့ တအိမ်ထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတာကိုပါ ။ “ သား..ထမင်းစားမလားဟင်….အန်တီ ခူးလိုက်မယ်…..” လို့ ဒေါ်ဝိုင်းစုက လာမေးသည် ။“ စားမယ်.အန်တီ..ကျနော် ရေအရင် ချိုးလိုက်အုံးမယ်..တနေကုန် အလုပ်များနေလို့ လူလည်း ချွေးစော်နံ ပေရေ နေတယ်….” “ ဟုတ်ပြီ..အန်တီ စားဖို့ ပြင်လိုက်မယ်နော်….” မီးဖိုခန်းဖက်ဆီကို လျောက်သွားတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ အနောက်ပိုင်း ကို ဝေလကြီး မသိမသာ ကြည့်လိုက်မိသည် ။
ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် တင်ပါးကောင်းသည် ။ လှသည် ။ ဝိုင်းစက် ဖုထွက်ကော့ထွက်နေသည် ။ ခါးကလည်း ခပ်သေးသေး ။ တံတွေးကို ဂုကနဲ မြိုချမိရင်း ဝေလကြီး ရေချိုးခန်းဖက်ကို တဘက်လေး ပုခုံးပေါ် တင်ပြီး ထွက်သွားလိုက်သည် ။ ဝေလကြီးက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို ပစ်မှားမိနေသလို မီးဖိုထဲ စားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစု မှာလည်း သမီး မရှိတဲ့အချိန် ဝေလကြီးနဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတာကို ရင်ခုံ စိတ်လှုပ်ရှားနေပေသည် ။ ဝေလကြီးနဲ့ တအိမ်ထဲ နေနေတာ သမီးအိပုံ့နဲ့ ဝေလကြီးတို့ ချစ်တင်းနှီးနှော ချစ်ဗြူဟာခင်း ကြတာတွေကို သူမ အမြဲ ကြားနေရလို့ အကြိမ်ကြိမ်ဘဲ သူတို့လုပ်ကြတာကို ချောင်းကြည့်မိခဲ့သည် ။ တခါမှာ သူမ ချောင်းနေတာ ကို ဝေလကြီး သိသွားသည် ။ ဝေလကြီး သည် သူမ စိတ်ဝင်စားသည် ကို သိသွားသည် ။
တနေ့နေ့ ဝေလကြီးသည် သူမကို လာကြံစည်လိမ့်မည် လို့ ဒေါ်ဝိုင်းစု ထင်မိနေသည် ။ အခုလည်း ဒီကောင်ကြီး ရေသွားချိုးနေသည် ။ ခါတိုင်းလိုဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ချိုးမှာ သေချာသည် ။ သူရေချိုး တာကိုလည်း ဒေါ်ဝိုင်းစု ချောင်းဖူးသည် . .။ သူ့ငပဲကြီးက နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး ။ သမီးအိပုံ့ ဒါကြီးကို ခံနိုင်တာကို ဒေါ်ဝိုင်းစု အံ့သြသည် ။ ဒီလီးကြီးကို သဘောကျမိပြီး ကိုယ့်ဖါသာ ပွတ်မိရတာက ခဏ ခဏ..။ အခုလည်း သူ့ကို ကိုယ်တုံးလုံး အနေအထားနဲ့ မြင်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်နေသည် ။ သွားချောင်းချင်နေသည် ။ စိတ်တွေကို အရမ်းကို ချိုးနှိမ် ချုပ်တီးထားနေရသည် ။ ဒါပေမယ့် သမီး မရှိတုံး ချောင်းရတာက ပို လွတ်လပ်တာ မို့ ခြေထောက်တွေက အလိုလို ရေချိုးခန်းဖက်ကို ဦးတည်သွားမိနေသည် ။ ချောင်းနေကျ အပေါက်လေးကနေ ရေချိုးခန်းထဲမှာ တဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ ရေခပ်ချိုးနေတဲ့ ဝေလကြီး ကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။
အို…. ဒေါ်ဝိုင်းစု တကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်း ထသွားရသည် ။ သူမ မြင်ချင်နေတဲ့ ဝေလကြီး ရဲ့ လိင်တန် ဆာကြီးသည် မတောင်သေးတာတောင် လုံးပတ်တုတ်တုတ်နဲ့ အရှည်ကြီး တရမ်းရမ်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရ လို့ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်မိသွားရသည် ။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဝေလကြီးနဲ့ လိုးလိုက်ချင်မိသည် ။လက်တဖက်က အလိုလို ပေါင်ကြား ဂွဆုံနေရာကို ရောက်သွား ရသည် ။ ဖေါင်းကြွတဲ့ ယားနေတဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်မိသွားရသည် ။ ဝေလကြီးသည် ရေချိုးပြီးသွားလို့ တဘက်ကြီးနဲ့ ကိုယ်ကို ပွတ်တိုက်ရင်း ပုဆိုးကို အမြန်ဝတ်လိုက်သည် ။
ဟာ..သူ ထွက်လာတော့မယ်….. ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း ချောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ချောင်းနေတာ ဝေလကြီး ထွက်လာတော့မှာမို့ ကဗျာကရာ ကုန်းနေရာ က ထလိုက်ပြီး မီးဖိုဖက်ကို ပြေးသွားလိုက်သည် ။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝေလကြီးသည် ဒေါ်ဝိုင်းစု ရေချိုးခန်းဖက်က မီးဖိုဖက်ကို ပြေးသွားတာကို မြင်လိုက်သည် ။ “ ဟင်…..ဘာလို့ ပြေးတာလဲ..ရေချိုးခန်းဖက်မှာ ဘာလာလုပ်သလဲ..သူ ငါ့ကို လာချောင်းကြည့်တာလား….” ဝေလကြီးလည်း အဝတ်မလဲတော့ဘဲ မီးဖိုခန်းဖက်ကို လျောက်သွားလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် နွှေးထားတဲ့ ပဲဟင်းတွေကို ဇလုံအသေးစားလေးထဲကို လောင်းထည့်နေသည် ..။ ဝေလကြီးကို ကျောခိုင်းထားသည် ။
ဟင်..ထမိန် အောက်ဖက် တင်ပါးကြီးတွေအနားမှာ အရည်ကွက်ကြီး ပါလား ။ တောက်..အန်တီဝိုင်းစု စိတ်တွေ တအား လာနေတာ ဖြစ်မည် ။ “ လာ…သား..စားကြရအောင်….” ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် ခေါ်သာခေါ်သည် ။ မျက်လုံးချင်း မဆုံအောင် လွှဲကာထားသည် ။ နည်းနည်း တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ် နေတဲ့ပုံ ရှိသည် ။ သေချာသလောက်ဘဲ..။ငါ့လီးကို တွေ့ချင်လို့ လာချောင်းတာ …။ ( အန်တီ….အန်တီ့ကို ပြောစရာ ရှိလို့….) ဝေလကြီးရဲ့ အသံက အက်ကွဲကွဲနဲ့ ။ ( ဘာများလဲ သားရယ်……) ( ကျနော်..ကျနော်…..အန်တီ့ကို ချစ်မိနေတယ်….) ဒေါ်ဝိုင်းစု မအံ့သြပါ ။ သူကလည်း ဝေလကြီးကို တပ်မက်သဘောကျနေတာဘဲလေ ။ ( မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်တာဘဲ မောင်ဝေလရယ်……) ( ကျနော် အနိတီ့ကို အိပုံ့နဲ့ မဖြစ်ခင်ထဲက ချစ်နေမိတာ..) ဝေလကြီးလည်း ဒေါ်ဝိုင်းစုကို ဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ပစ်လိုက်ပါပြီ ။ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီး အတင်းထိန်းချုပ်နေခဲ့ရတာနဲ့ တဏှာကြွပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တာနဲ့ လွန်ဆွဲနေခဲ့ရာက ဝေလကြီးက အတင်းဖက် အတင်း နမ်းလိုက်တော့ ထိန်းချုပ်ခဲ့တာတွေ လွတ်ထွက်သွားပြီ ။ ဝေလကြီးကို တုံ့ပြန် နမ်းပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပြန်ဖက်လိုက်မိသည် ။
ဝေလကြီးရဲ့ လျာကြီးက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ပါးစပ်ထဲက လျာကို ထိုးကစားနေသည် ။ သူ့လက်ကြီးတွေက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ စွင့်ကားလုံးကော့နေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို အားရပါးရ ကိုင်ဆုပ်နေသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် သမီးအိပုံ့နဲ့ အပီလိုး လိုးနေတဲ့ ဝေလကြီးကို စိတ်လာနေမိတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ အခုလို ပွင့်လင်းသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ သူကိုင်တာတွေကိုလည်း တအား သဘောကျမိသည် ။ ကျေနပ်နေသည် ။ “ ချစ်တယ်..အန်တီရယ်……” “ အန်တီလည်း သားကို ချစ်ပါတယ်ကွယ်…..” ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ဝမ်းပျဉ်သား ခပ်စူစူလေးကို ဝေလကြီးရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ ဒုတ်ကြီးက လာထောက်နေသည် ။ ဒါကြီးကို စွဲလန်းမိခဲ့တာ ကြာနေပြီ ။ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ဒီဒုတ်ကြီးဆီကို ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ လက်က ရောက်သွားရသည် ။
“ သားရယျ…အနျတီတို့ မှားနကွေသလားကှာ…..” လို့ ပါးစပျကသာ ပွောနသေညျ ။သူမလကျကတော့ ပုဆိုးပျေါ ကနေ ဒုတျမာမာကွီးကို ပှတျသပျနမေိသညျ ။ “ မမှားပါဘူး..အနျတီရယျ..ခဈြမိတာတော့ ဘယျတတျနိုငျမလဲ….ကနြျောက အနျတီ့ကို အိပုံ့ထကျ အရငျတောငျ ခဈြမိတာပါ…..” ဝလေကွီးရဲ့ လကျတဖကျက ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ ပေါငျဂှဆုံနရောကို စမျးလိုကျသညျ ။ “ ဟုတျလို့လား….” “ ဟုတျတယျ….အနျတီ့ကို အရမျး စှဲလနျးနတော….” “ ယုံပါဘူး….အို့..” ဒျေါဝိုငျးစုရဲ့ စောကျဖုတျအကှဲကွောငးကို လကျခြောငျးတှနေဲ့ ပှတျဆှဲလိုကျလို့ ဒျေါဝိုငျးစု တှနျ့တုနျသှားသညျ ။ ဝလေကွီးက သူမကို အိပျခနျးထဲကို ဆှဲချေါသှားသညျ ။
ကျွတ်လုလု ထမိန်ကို စွန်တောင်ဆွဲလို့ ဝေလကြီးရဲ့ အနောက်ကနေ ပါသွားတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ပေါင်ကြား တဝိုက်မှာ အရည်တွေနဲ့ စိုစိုရွှဲနေပြီ ။ “ သားရယ်….ကြမ်းလိုက်တာ…..” “ သားလို့ မခေါ်နဲ့တော့….” “ မင်းက သားမက်လောင်းမို့ပါကွယ်….” “ ဟင်း..အခု လင် ဖြစ်တော့မယ်…အန်တီ….မောင်လို့ဘဲ ခေါ်တော့….” ဝေလကြီးသည် ဒေါ်ဝိုင်းစုကို ဖြုတ်ချင်နေတာ ကြာပြီ ။ အခုလို အခွင့်အခါကောင်းတဲ့အချိန်မှာ လက်မလွှတ်တော့ ။ ကုတင်ပေါ် အတက်မှာထဲက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို အကုန်လုံး ချွတ်ပစ်လိုက်ပါသည် ။ သူ့ခါးဝတ်.ပုဆိုးကိုလည်း ချွတ်ချပစ်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်စလုံး ဗလာကိုယ်တွေနဲ့ ဖြစ်ကုန်သည် ။ “ လာ အန်တီ..ကျနော် အန်တီ့ကို နမ်းပေးမယ်…နမ်းချင်နေတာ ကြာလှပြီ…..” ဒေါ်ဝိုင်းစုက သူမ နှုတ်ခမ်းကို စုတ်မည် လို့ ထင်လိုက်ပေမယ့် ဝေလကြီးက သူ့ခေါင်းကို ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ဆင်းချသွားလို့ ဟဲ့ဟဲ့…ဘာလုပ်မလို့လဲ လို့ လန့်သွားပြီး ပေါင်တန်တွေကို ပူးစေ့ဖို့ ကြိုးစား လိုက်လေသည် ။
ဝေလကြီးက ပေါင်တန်တွေကို ဆွဲဖြဲကားလိုက်ပြီး အမွှေးပါးပါး နဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းကြီးကို အား ရပါးရ နမ်းလေတော့သည် ။ “ အို..ဟာ…အင်….သား…သား…..ဘုန်းနိမ့်ကုန်ပါ့မယ်ကွာ…..” ဝေလကြီးက အကွဲကြောင်းကို သူ့နှာခေါင်းထိပ်နဲ့ အစုန်အဆန် ပွတ်ဆွဲသည် ။ “ အို..ဟင်…..အာ…….သား..ကောင်လေး..မင်း…မင်း သိပ်ဆိုးတယ်……” ပါးစပ်က ဆိုးတယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲက သဘောကျနေသည် ။ ကြိုက်နေသည် ။ နှာခေါင်းပြီးတော့ လျာကြီး….။ လျာအပြားလိုက်ကြီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ဝေလကြီး ယက်နေသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစု တ အား အော်ညည်းတော့သည် ။
“ အိုး…သား……အမလေး……ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ…..အား…….အူး…..အာ…အာ…..အို…..အမလေးလေး..” ပြတ်ပြတ် ပြိပြိ အသံတွေ ထွက်နေသည် ။ ဝေလကြီးရဲ့ ဘာဂျာသံတွေ သောသောညံနေသည် ။ “ အို…အီး……အီး…..အား…..အား……အား…….အား…..” ဝေလကြီးသည် အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေးတဲ့ စောက်ဖုတ်လှလှကြီးကို ယက်လည်းယက် စုတ်လည်း စုတ်သည် ။ “ အမလေး..သားရယ်…..အိုးဟိုးဟိုး……အူး……..အူး…..” စောက်စိကို အစုတ်ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်ဝိုင်းစု ဖျတ်ဖျတ်လူးသွားသည် ။ တုန်ခါသွားသည် ။ ဝေလကြီးရဲ့ ခေါင်းကို လည်း ဖမ်းကိုင်လိုက်မိသည် ။ ဝေလကြီးသည် အနံ့အသက် မရှိတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စိတ်ထဲက သဘောကျသွားသည် ။ ဒီမိန်းမ သန့်ရှင်း သည် လို့လည်း မှတ်ချက်ချလိုက်ပြီး တပြတ်ပြတ် နဲ့ ဆက် ယက်ပေးလေသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း မခံဘူးတဲ့ ဘာဂျာအယက်အစုတ်တွေကို ခံရလို့ တအား စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် ။
လင်ဖြစ်သူက တခါမှ ဒါမျိုး မလုပ်ပေးဖူးခဲ့ဘူး ။ သားမက်လောင်းနဲ့ ဖြစ်ပျက်မိလို့ ရှက်သလိုလို စိတ်မကောင်းဖြစ်သလိုလို ဝမ်းနည်းသလိုလို ဖြစ်နေမိခိုက် ဝေလ ကြီးက ဘာဂျာမှုတ်တာကို ရုတ်ချည်း ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး သူမ ကိုယ်ပေါ်ကို တက်လာလို့ “ သား….မကောင်းဘူး ထင်တယ်ကွယ်…အန်တီတို့ ရပ်လိုက်ကြရအောင်ကွယ်….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ဝေလကြီးသည် သူမပြောစကားကို နည်းနည်းမှ ဂရုမစိုက် ။ နားမထောင် ။ သူ့ဒုတ်တုတ်တုတ်ကြီး ကို အရည်တွေ တအားရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိသွင်းလိုက်ပါသည် ။ ဒီအထိအတွေ့ကို သူမ လိုလားနေခဲ့တာ လင်သေကထဲကပါဘဲ ။
တအားကို ယားပြီး လီး ဆာနေခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ သူမလိုအင်ကို ဖြည့်ပေးမယ့်သူ က ရှိနေပြီ ။ သမီးလည်းလိုး အမေလည်းလိုးတဲ့ ငလိုးကောင်ကြီး ဝေလက သူ့လီးတုတ်တုတ်နဲ့ ဖိသွင်းပေးနေ ပြီ ။ “ အိုး……အီး…..” လီးထိပ်ခေါင်း မှိုပွင့်အော်လံကြီး ပြိကနဲ တင်းကနဲ စောက်ဖုတ်ထဲ အောင်းလာလို့ သူ့ကို လှမ်းဖက်ပြီး ပေါင်တန် တွေကို ဖြဲကားပေးလိုက်မိသည် ။ လီးသည် တုတ်လှသည် ။ ရှည်လည်း ရှည်သည် ။ စောက်ခေါင်းနံရံသားတွေကို တအား ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ အထိ အတွေ့က သူမကို ဆတ်ဆတ်ခါ ကောင်းသွားစေသည် ။
“ အိုး…….အား….” ဝေလကြီး သည် ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ စောက်ဖုတ်သည် ဒီလောက် တင်းကြပ်လိမ့်မယ် လို့ မထင်ထားခဲ့။ မိန်းမတွေသည် အရင်က အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ငြားလည်း ကြာရှည် လိင်ဆက်ဆံတာ မရှိခဲ့ရင် စောက်ဖုတ်ပေါက်သည် အသားတက်ပြီး ပြန်ကြပ်လာသည် ဆိုတာကို သူ လက်တွေ့ သိလိုက်ရသည် ။ အရသာထူးလှတဲ့ တင်းကြပ်အိနေတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတန် တဆုံး ထိုးသွင်းလိုက်ရင်း သူမ ရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားကြီးနှစ်လုံးကို သူ့မျက်နှာနဲ့ ပွတ်လူး နမ်းရှုံ့လေသည် ။ လီးတန်တဆုံး ဝင်လာလို့ အီးကနဲ အော်မိရင်း သူ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို လှမ်းဆုပ်လိုက်မိတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် လီးတန်ကြီး အနောက်ကို ထုတ်ဆုတ်သွားပြန်လို့ ရင်ထဲ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်သွားရပြန်သည် ။
ဝေလကြီးသည် ကြပ်ပေမယ့် လိုးလို့ရနေပြီ ဖြစ်တဲ့ စောက်ဖုတ် အကောင်းစားကြီးကို တချက်ချင်း လိုးနေပါပြီ ။ တင်းကနဲ တထစ်ထစ်နဲ့ ဝင်သွားလိုက် စီးကနဲ ပြန်ဆုတ်လိုက်နဲ့ တချက်ချင်း မှန်မှန် သွင်းပေးထုတ်ပေးနေတဲ့ စံချိန်မှီ လီးတုတ်ကြီးကို ဒေါ်ဝိုင်းစု အစွဲကြီး စွဲသွားရပါပြီ ။ ကောင်းလိုက်တာ သားရယ်…..။ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ နို့သီးခေါင်း မာမာလေး တဖက်ကို စုတ်နေရင်း ဖင်ကော့ညှောင့်ထည့် ပေးနေသည် ။ ဝေလကြီးလည်း လိုးလို့ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် အရသာထူးကဲပြီး ပြီးချင်ချင် ဖြစ်လာသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုမှာတော့ တော်တော်ကြာ ပြတ်လပ်ခဲ့တဲ့ ကာမစည်းစိမ်တွေကို ပြန်ရလိုက်တာမို့ နှစ်ကြိမ်တောင် လမ်း ဆုံး ပန်းတိုင်ကို တက်ရောက်ပြီးသွားသည် ။
လိုးဆောင့်ချက်တွေက ကောင်းလွန်းလို့ အောက်ကနေ ပင့်လိုက် ကော့လိုက်နဲ့ တုံ့ပြန်နေမိသည် ။“ ကောင်းလား အန်တီ…” “ ကောင်းတယ်…ဟင်း…တအား ကောင်းတယ်…သားရယ်….” ဖပ်ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ်ဖပ် ဆီးချက်မှန်မှန် ရိုက်ခတ်နေတဲ့ အသံတွေနဲ့ ညည်းအော်သံတွေ ထွက်နေသည် ။ “ အန်တီ…တခု လုပ်ပေးမလားဟင်….” “ ဘာလဲသား..လုပ်ပေးမယ်လေ…ဘာလိုလဲ…” “ ပုံစံပြောင်းပြီး လုပ်ချင်လို့….” “ သားက အန်တီ့ကို ဘယ်လို ပုံနေပေးစေချင်လို့လဲဟင်…..” “ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးမလား….” ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် သူမကို စောက်ဖုတ်လည်း ယက်ပေး..၂ကြိမ် ပြီးအောင်လည်း လိုးပေးထားတာမို့ သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံကို ချက်ချင်းဘဲ နေပေးလိုက်ပါသည် ။
ဖင်ဝိုင်းစက်စက် ဖြူဖွေးဖွေးကြီးတွေက ထောင်ထားလို့ ပိုလှသလိုဘဲ ။ ဖင်တွေကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပိုလို့တောင် လှနေသည် ။ “ လှလိုက်တာ အန်တီရယ်…..” “ ဘာ…..” “ အန်တီ့စေက်ဖုတ်က တအားလှလွန်းလို့..” “ ကြံကြံစည်စည်ကွယ်….ဟင်းဟင်း….အန်တီ ရှက်လာပြီကွာ…..” “ မရှက်ပါနဲ့ဗျာ….အန်တီ့ဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း အန်တီ့စောက်ဖုတ်လှလှထဲကို ကျနော့်လီး ဝင်ထွက်နေတာကိ ကြည့်ရင်း လိုးလိုက်အုံးမယ်….” “ မင်းလေး..စကားပြော သိပ် ပက်စက်တာဘဲကွာ..အန်တီ နားရှက်တယ်….ဟွန်း….” ဝေလကြီး ဆွဲပြီ ။ သူ့လီးတန်ကို စောက်ဖုတ်ထဲ ဖိသွင်းထည့်လိုက်ပြီး တစွပ်စွပ် မြည်အောင် ဆောင့်လိုးလေ သည် ။ကောင်းလိုက်တဲ့ အရသာ….။
ဒျေါဝိုငျးစုလညျး တဟငျးဟငျးနဲ့ ဖငျကွီးထောငျပေးရငျး ခံနသေညျ ။ ဝလေကွီးရဲ့ လီးတုတျတုတျရှညျရှညျကွီးက လညျး တအား ဆောငျ့ထညျ့နသေညျ ။ သူ့ေ၈ှးစိကွီးတှကေ သူမရဲ့ ဖငျကွားထဲကို တဖတျဖတျနဲ့ ရိုကျခတျလို့ နသေညျ ။ ဖပျဖပျဖပျ…….. ဖပျဖပျဖပျ…ဖပျဖပျဖပျ…အား…….အား…….အူး……..အမလေး…….အား……..အီး……… ကာမစညျးစိမျကို နှဈယောကျစလုံး ခံစားနကွေရငျး ဝလေကွီးသညျ ကောငျးလှနျးတဲ့ အရသာကွောငျ့ သုတျ ရညျတှကေို တဖပျဖပျနဲ့ ပနျးထုတျလိုကျရငျး ပွီးခွငျး ပနျးတိုငျကို တကျလှမျး ရောကျလို့သှားလသေညျ ။..
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မောငျလို့ပဲချေါမယျနျော